Madaxda gobolka Mudug oo meel-ka-dhac ku tilmaamay shirkii shalay lagu diiday imaatinka AMISOM, soona dhaweeyey keenistooda. – Radio Daljir
Galkacyo, Nov 02 – Shir ay si wadajir ah u qabteen guddiga nabad-galyada gobolka Mudug oo ay hormuud u yihiin guddoomiyayaasha gobolka iyo degmada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Galkacyo kaasoo lagu dhaleeceeyey nuxurkii ka soo baxay shir shalay lagu diiday imaatinka ciidan AMISOM ah.
Shirkaan maanta oo ka dhacay xarunta maamulka gobolka ayaa waxaa ka soo qaybgalay xubnaha guddiga nabad-galyada ee gobolka Mudug oo ay ka mid yihiin labada guddoomiye ee gobolka iyo degmada, taliyayaasha ciidanka amniga iyo kuwa daraawiishta, guurti-dhaqan iyo indheergarad badan oo ka tirsan wax-ku-oolka qaybaha bulashada ee gobolka Mudug.
Kulankaasi ayaa laga soo saaray war-saxaafadeed lagu riddinayo hadalladii shalay ay sheegeen siyaasiyiin caan ah oo gobolka Mudug ka soo jeeda, xilal kala duwanna ka soo qabtay dawladda Puntland, kuwaasi oo khudbado ka akhriyey shir ka dhacay xarunta nabadda iyo hormarinta Galkacyo, shirkaasi oo lagu qaadacay in gobolka la keenno ciidamo AMISOM ah taasoo ah qorshe dawladda Puntland iyo midda federaalku horay iskula-meeleeyeen.
Nuxur-qoraaleedka maanta ee ka soo baxay guddiga nabad-galyada gobolka ayaa lagu sheegay shirkaasi shalay in uu ahaa mid sharaf dhac wayn ku ah sumacadda iyo jiritaanka ummadnimo, iyagoo ku xusay qoraalkooda in lagu maxaabsaday bulshada gobolka, maqnaanshiyana lagu turjumay rabitaankooda.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac ‘Tigay oo akhriyey nuxurka qoraalka ay soo saareen ayaa sheegay siyaasadda iyo dahana bulshada gobolka dawladdu in ay u xilsaaratay maamulka, ayna iyagu wakiil u yihiin ummadda, waxaana qoraalka lagu tilmaamay siyaasiyiinta diiday imaatinka AMISOM in ay yihiin kuwo horay ugu fashilmay siyaasadda dalka, iyagoo dhinaca kalena qoraalkooda ku sheegay in ay soo dhawaynayaan keenitaanka ciidamo AMISOM ah.
Kulankaan maanta ee lagu ayidayo siyaasadda iyo rabitaanka dawladda Puntland ee ku aaddan keenista ciidan shisheeye ayaa yimid kaddib markii shalay kulan ka dhacay magaalada Galkacyo looga horyimid qorshaha ciidankaasi.